[hery] : (kotsokotso. ka) mt, P. (manotsokotso. ha): Manetsiketsika. Ahitsio
[hery] : (otrona) mt. P. (manotri)na): Mamihina na manodidina amin'ny sandry sy ny tanana: Raha tsy olona telo tsy afaka hanotrona io vatana bontdna lo, 1 Manodidina: Manotrona ny ta. ny ny ranomasina, ? Miaraka amin'ny olona iray mba hiaro azy sy hanome voninahitra azy: Nanotrona ny lehiben'ny governemonta ny ben'ny tandna sy ny mpitondra fanjakana teo an.toerana, Ahitsio
[hery] : (otrika) mt. P, (manotreha): Mitahiry vain'afo ao anaty lavenona: Manotriha afo. 1 Manao amin'ny toerana tsy azon-drivotra mba ho masaka: Manotrika voankazo, + Manafina, manrpiery, mampanritsaka miaramila; na enti-milaza ny miaramila miaflna, miery, mifitsaka. Ahitsio
[hery] : p.t.: Misy ketrona, miketrronketrona: Manotraka ny hoditr'io biby io, + Mailamailaka, marisika: Nano tra. ka er? Rakoto raha niangaviako hikarahara ireto zozo kamboty ireto. / Gaga aho fa tsy nanotraka firy Lay raha nilazako ny flkasanao, Ahitsio
[hery] : (otra) mt. p, (mono. ra): Misafo sady mamoritra amin'ny tanana ny faritra iray amin'ny tena mba hampahalefadefaka ny hozatra marary na mivonto na vizana. Ahitsio
[hery] : (tototra) mt, s. (manotbra): Manetsiketsika ny foly amin'ny fanenjanana azy ka amin'izay izy mitovy tantana hatrany tsy misy madilana, Ahitsio
[hery] : (tototra) mt. P. (manotora): Manarona: Manototra tany ny vodihazo, * Mameno: Manototra na. handro ny latabatra, + Mandrakotra: Kopahy ny uouoka manototra ny akanjonao, ? Manafotra: Manototra hersa. tra olona, Ahitsio
[hery] : (totototo) mt. P. (manotototoa): Mampivezivezy etsy sy eroa tsy misy vokany toy inona, Ahitsio
[hery] : (hoto) mt. P. (manotohotoa): Mandrovitra, mandrotika, mamotipotika, Ahitsio
[hery] : (toto) mt. P. (mono. toa): Mamely amin'ny flsoirana amin'ny tandroka: Mora fan,tarina ny omby manoto, - Mifanoto rahona: enti-milaza rahona misatrotroka, na koa fahamaroan-lavatra samihafa mety hanahirana. / Mifanoto ulntana: enti-milaza olona roa izay tsy mifanaraka fa mifanimba ny tonon'androny, Ahitsio
[hery] : (otina) mt. p. (ma. notina): Manozongozona, manetsiketsika (hazo). Ahitsio
[hery] : (kotika) mt. p. (manotikoteha): Mamotipotika: Aza manotikotika ny ahanjoko, + Mampisafotofoto, mampisavorovoro: Manotikotika kofehy, ? mt, s.: Toa tsaroana misy mandroridroritra, mitambolimbolina, mitangolika: Manotihotika ny kiboko, Ahitsio
[hery] : (oty) mt. p, (manota. za): Mampisara-nono (zaza): Manoty zazo, Ahitsio
[hery] : (tinta) mt, s,: Miteraka fanaintainana, fanintontsintonana ao amin'ny tena, Ahitsio
[hery] : (ota) mt. p. (manotd): Manao hadisoana, heloka: Nanota taminao aho ka tsy mendrika ny hantsoina hoe zanakao akory. 1 Mandika didy na fitsipika na zavatra tsy azo atao: Manota fady, Ahitsio
[hery] : (hosotra) mt, P. (manosora): Mandalotra, manatavona amin'ny menaka, Sahondra tsan'alina. ? Manamasina, mametraka na manokana hiandraikitra raharaha lehibe sy ambonY: Manosotra ho mpitandrina. - Manoso-potaka: manaratsy ny olona marina no-ho ny volohala na tsy fitiavana. / Manoso.dratsy: mitovitovy amin'ny manoso-potaka ihany, saingy ny ratsy ataon'ny hafa no lazainy fa ataon'ilay olona haratsiny, Ahitsio
[hery] : (sosona) mt, p, (ma. nosdna): Manisy sosona na zavatra anampy na anatevenana avy ao anaty: Manoso. na varatiarana, Ahitsio
[hery] : (sosoka) mt, p, (ma. nosoha): Manampy na manisy sosoka mba hitovy tantana tsara. Ahitsio
[hery] : (osina) mt, p. (ma. nosena): Manafotetaka, mandrakotra amin'ny fotaka, vovoka, loko, loto..., manavona, manatavona. Ahitsio
[hery] : (tosika) mt. p, (ma. noseha): Mandronjina mba hivoaka amin'ny faritra iray na hamotraka: Aza manosi. ha ahy ianao fa teuam.be it9 akaikiko it9. 1 Mandroaka tsy ho anisan'ny fianakaviana na foko, manary: Ny fokonolona no nanosika azy any ivelan'ny tandna 1 Manakisaka ny vala namefena ny hazandrano mba hidirany ao anaty vovo: Manosika trondro, Ahitsio